ရွှေခွေးမလေး(အပိုင်း ၁)Shwe Khawe Ma Lay (Part 1)ယဥ်လက်၊အိစိကွေး၊သင်ဇာဝင်းပြည့်၊သျှင်မင်းသူ
382 419 มุมมอง
Shwe Khawe Ma Lay (Part 1)
လှုပ်ရှားမှုအသားပေး မေတ္တာဖွဲ့ ဇာတ်ကြမ်းကား
ယဥ်လက်၊ အိစိကွေး၊ ဝင်းမင်းသန်း၊ သျှင်မင်းသူ
ဇာတ်လမ်း - ဦးနိုင်
ဇာတ်ညွန်း - စိုးခန့် (ကြို့ပင်ကောက်)
ဒါရိုက်တာ - သန့်ဇင်အောင်
ပုလဲဖြူသည် ဦးလေးက အရက်သမား ဖြစ်နေပြီး ကကမောင်းရာတွင် အိမ်က အိပ်စိုက်နေရသောကြောင့် သူမက ကကဝင်မောင်းနေရသည်။ ဒေါ်မေမေအောင်သည် လက်ဝတ် ရတနာ ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ကိုင်နေပြီး တစ်ဦ်းတည်းသော သားကလေး နွေဦးကို ကို ငုံထား မတတ် ချစ်လေသည်။
ပုလဲဖြူသည် နွေဦးကို ကို လုယက်သူများထံမှ ကယ်တင်ပြီးနောက် ရင်းနှီးသွားကြသည်။
နွေဦးကိုက ပုလဲဖြူကို ချစ်ခွင့်ပန်သောအခါ ပုလဲဖြူက စဥ်းစားခွင့်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ သည်။
ဒေါ်မေမေအောင်က ပုလဲဖြူကို ခေါ်တွေ့ပြီး သူ့သားနှင့် မပါတ်သက်ပါက သိန်း ၁၅၀ ပေး မည်ဟု ရင့်သီးစွာ ပြောလေသည်။ ပုလဲဖြူက နွေဦးကို ရအောင် ယူပြမည်ဟု စိန်ခေါ်ခဲ့သည်။
ပုလဲဖြူ စကား အတည်ဖြစ်သွားသလားဆိုတာ ရွှေခွေးမလေး(အပိုင်း ၁) ရှု့စားပါနော။
-မြန်မာ ဇာတ်ကား ချစ်သူအမျိုးတို့းရေ -
ရွှေမျက်ခြယ် ကို ကြည့်ပြီးလို့ နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် Subscribe လုပ်ပေးပါ။ ခေါင်းလောင်းလေးကို နှိပ်ထားပါနော။ Like ကလေးနှိပ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း Share ပေးပါနော။
-အားတဲ့ အချိန် လေးမှာ Comment လေးတွေလည်း လာရေးပါနော။ ယဥ်ကျေးသော Comment လေးတွေ၊ အားပေးတဲ့ Comment လေးတွေ ဖတ်ရတာကို ရွှေမျက်ခြယ်က ဂုဏ်ယူပါတယ်နော။
Item to Shwe Myat Chel Media.
ခ်စ္​ဖို႔​ေကာင္​း ယဥ္​လတ္​က စကား​ေျပာတာ​ေလးက အသက္​
Zin Ko14 วันที่ผ่านมา
@Shwe Myat Chel Media အမျိုးသားသုံးနှစ်လေး
** ရွှေမျက်ခြယ် မီဒီယာ **ကို အားပေးကြည့်ရှု့ခဲ့သော မြန်မာ ဇာတ်ကား ချစ်သော အမျိုးတို့ရေ - ** ၂၀၂၁ ** ခုနှစ် နှစ်သစ် မှာ ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ။ ရောဂါကပ်ဘေး မှ ကင်းဝေးပါစေ။ စီးပွားလာဘ်လာဘများလည်း တိုးတက်ပြီး ကြံစည်သမျှ အောင်မြင်ကြပါစေလို့ ** ရွှေမျက်ခြယ် မီဒီယာ ** မိသားစုက ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပါတယ်။
Shwe Myat Chel Media18 วันที่ผ่านมา
Thu Zer Win-หลายเดือนก่อน
Shwe Myat Chel Mediaหลายเดือนก่อน
အားပေးတာကို ရွှေမျက်ခြယ်ကလည်း ကျေးဇူးပါနော။ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းတို့နဲ့ ပြည့်စုံပါစေ။ Subscribe လုပ်ထားပြီး ခေါင်းလောင်းလေးကို နှိ်ပ်ထားနော်။
Yadanar Myint Myat Payeหลายเดือนก่อน
အားပေးမှုကို ရွှေမျက်ခြယ်ကလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော။ ကျန်းမာပါစေ၊ ကပ်ရောဂါဘေး ကင်းဝေးပါစေ။
Hei you i always like youuuu
Peer Zokhuma Tlauหลายเดือนก่อน
You are the best အားပေးမှုကို ရွှေမျက်ခြယ်ကလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော။ ကျန်းမာပါစေ၊ ကပ်ရောဂါဘေး ကင်းဝေးပါစေ။
I like this movie the best movie
ဘယ္ဇာတ္ကားမွာလဲမသိဘူး ကေလးသရုပ္ေဆာင္ထာတယ္ မင္သားက
သူက ကေလးသ႐ုပ္ေဆာင္ အိစ္ေကြးပါအကို ဇာတ္ကားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကေလးသ႐ုပ္ေဆာင္ လုပ္ဖူးပါတယ္ဗ်
Thãvara Jack kiหลายเดือนก่อน
Yinlet ကား အသစ္တင္ေပးပါ
အီစီေကြး ေလး သားသားေလး အကယ္ဒမီ ျမန္ျမန္ရပါေစ😍😘
ေဖေဖခ်စ္တဲ့ သား ေမေမခ်စ္တဲ့ သားหลายเดือนก่อน
Thank you so much bar shwe myat chel So nice movie.
May Lay Samusakunหลายเดือนก่อน
Chit min Khantหลายเดือนก่อน
Theik Thu Winหลายเดือนก่อน
အိစိေကြးေတာင္ မင္းသားေနရာေရာက္ေနရာေရာက္ၿပီပဲ ျဖစ္သင့္တယ္
May Thar Layหลายเดือนก่อน
Lal Hmun Engaหลายเดือนก่อน
Moe moe than Myanmarหลายเดือนก่อน
အီစီေကြး ႀကိဳက္ လို႔ ၾကည့္တာ
Taw King29 วันที่ผ่านมา
Ko Zaw Minหลายเดือนก่อน
ခန့်စည်သူ ငယ်ငယ်တုန်းက ရဲ့ ဖိုက်တင် ဇာတ်ကားတွေတင်ပေးပါ
Phyo Myat Chelหลายเดือนก่อน
ရွှေခွေးမလေး(အပိုင်း ၂)Shwe Khawe Ma Lay (Part 2)ယဥ်လက်၊အိစိကွေး၊သင်ဇာဝင်းပြည့်၊သျှင်မင်းသူ
ดังแล้วลืมตัว "ลุงพล" เกิดจาก "สื่อ" ก็ดับได้เพราะสื่อ
มุมมอง 257 789
အခမ်းနားဆုံးမေတ္တာ - MYANMAR NEW FULL MOVIE 2020
Myanmar Tv Entertainment
အထာအသစ်နဲ့နှစ်ခါချစ်မယ်(ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး) နေတိုး ဝတ်မှုံရွှေရည် မင်းမော်ကွန်း ချစ်သုဝေ
Ba Wa Ma Aye Telt Mya Lay ( Part 1)Yin Let, Min Thu, Chit Phwe, Paing Khant
Myanmar movies-Yee Sarr Htar Tae Game-Myint Myat, Nay Dway,Nyi Htut Khaung, Shwe Hmone Yati
Shwe Sin Oo | Ma Way Tot Bu | မဝေးတော့ဘူး | Myanmar Movie
Thawe Nelt Ye Telt Than Yaw Zin (Part 1)သွေးနဲ့ရေးတဲ့သံယောဇဥ်(ပထမပိုင်း)Khant Si Thu, Nay Htoo Naing
มุมมอง 114 879
มุมมอง 654 464
อาจารย์ โอนิซุกะ โดนใส่ร้ายว่าขโมยเงินนักเรียน (สปอยซีรี่ย์) EP.4
มุมมอง 125 997
มุมมอง5478 533
มุมมอง 317 053
มุมมอง 83 425
มุมมอง 1 340 730